SIYAASADDU WAA WIXII SUURTA GAL AH … DR ISMAACIIL BUUBAA | Toggaherer's Weblog
Prof. Ismaaciil Maxamuud Hurre (Buubaa), oo ah siyaasi dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland balse ka tirsan baarlamaanka Somaliya, ayaa qiray inuu jiro bayaan uu dhawaan baahiyay Wargeyska Geeska Afrika, oo ay magaalada Djibouti ka soo saareen xildhibaanada reer Somaliland ee ku jira dawladda Somaliya.
Dr. Buubaa, oo isagoo jooga magaalada Nayrobi ee dalka Kenya xalay u waramay Wargeyska Geeska Afrika, waxa uu sheegay in ujeedada baaqaasi ahaa, dawladda Shariif Sheekh Axmed, oo ay u arkeen dawlad koonfureed oo sii fogaysay hamigoodii ku waajahnaa helitaanka midnimo Somaliyed oo ay muddo dheer daba joogeen balse hadda u muuqata gabaabsi.
Buubaa, oo ugu horayn la weydiiyay sida uu u arko xaaladda cusub ee uu galay dalka Somaliya, waxa uu yidhi, “Waa xaalad cusub oo la arko oo aan la garanayn waxay la iman doonto laakiin arrimuhu weli may saldhigin oo way cakiranyihiin, xagga wadaadadana weeye dhibaatada ugu weyn ee maanta jirtaa. Intii la isku hayay reer hebel iyo reer hebel waa wax la yaqaanay ee imika waxa la isku haystaa anigaa kaa diin badan iyo anigaa kaa diin badan. Kolkaas arrimuhu ma dhibyara laakiin haddana bal aan eegno hoggaan cusub ayaa la doortee.”
Mar la weydiiyay waxa uu ka ogyahay baaq uu dhawaan Geeska Afrika baahiyay oo ay ku muujinayeen quusta ay ka joogaan hamigoodii ay mudada dheer baadi goobayeen ee midnimo mar dambe dhex marta Somaliland iyo Somaliya, waxa uu ku jawaabay “Haa, baaqaasi wuu jiray, waana sidaas aad qorteen, runtiina dawladdan cusubna wuu ka faalloonayaa, oo dawladaas Djibouti ka soo baxday waxaanu u aragnaa inay ku soo rogaal celisay dawlad koonfureed, maba diidanin inay sidaas noqoto, laakiin arrimaha badhtamaha iyo koonfurta wadanka inay isku hawliso kuna taageerto maamulka Somaliland inuu sida uu wax u waddo uu ka sii badiyo oo wadanka dejiyo, weeye iyo inay caalamka ugu baaqaan inay wax la qabtaan, Somaliland, Somaliland-na waxaanu u aragnaa inay aqoonsato waajibaadka ka saaran dhibaatada Somaliya.”
Ismaaciil Buubaa, oo la weydiiyay in baaqoodaas loo fasiran karo inay quus joogaan waxa uu yidhi, “Siyaasadu waa wixii suurto gal ah, markaas inkastoo aanu u aragno dantu inay ku wanaagsantahay inay mid ahaato, laakiin haddii ay dani ka maarmi weydo in wadanku labadaas dal [Somliland iyo Somaliya] noqdo taasina waa mid ay tahay labada dhinacba inay si wanaagsan isugu taageeraan.”
Waxa Mr. Buubaa, la weydiiyay waxa ka jira warar muddooyinkii u dambeeyay soo baxayay oo sheegayay inuu iska casilay xubinimadii baarlamaanka Somaliya waxa uu yidhi, “Weli ismaan casilin, laakiin baarlamaankani inuu shaqayn doono iyo in kale Alle ayaa og, kolkay wakhtigeeda gaadho war buuxa ayaad iga maqli doontaa.”
Ismaaciil Buubaa, waxa uu ku doodday inaanu marna ka talin wax dibin-daabyo u gaysanaya guud ahaan xasiloonida Somaliland, waxaanu yidhi, “Hargeysa waa magaaladaydii, wixii khalkhal gelinaya degenaanshaha guud ahaan Somaliland horena ugma kicin, haddana ku kici maayo, laakiin mabda’dayga lamaan gaban, waxaanan arkayay in danta Somaliland ku jrto inay ka mid noqdaan Somaliya oo ay weliba hoggaamiyaan, laakiin haddii ay sidaas noqon weydo waa waxa siyaasadu ay tahay inaan aqbalo siday arrimuhu ku dhammaaddaan.”
Wargeyska Geeska Afrika, ayaa dhawaan baahiyay bayaan ay Djibouti ka soo saareen xildhibaanada Somaliland u dhashay ee ku jira dawladda Imbigaati. Baaqaas oo aan saxaafadda loogu tallo gelin bale nuqul ka mid ah uu Wargeysku helay, waxa ay ku sheegeen in dawladda Shariif Sheekh Axmed, soo afjartay hayaankoodii midnimo-doonka ahaa, waxaanay dawladda Shariif ku tilmaameen inay tahay xukuumad koonfureed oo xag jirnimo iyo go’doon ku sii fogaanaysa. Bayaankaas oo ku kala qornaa luuqadaha Ingiriisida iyo Somaliga, ayaa waxa ka muuqda saxeexooda, waxaana dadka saxeexay ka mid ah Ismaaciil Maxamuud Hurre (Buubaa) oo dhawr jeer dawladihii kala dambeeyay ee Somaliya loo dhisay ka noqday wasiirka arrimaha dibadda. Waxa kale oo ka mid ah Cabdalla Xaaji Cali, oo mar noqday maayarka magaalada Berbera iyo weliba badhasaabka gobalka Saaxil. “Dhismaha xukuumadda loogu magac daray ‘xukuumad midnimo qaran’, wuxuu soo afjaray hayaankii xildhibaanadu ugu jireen midnimo doonka, wuxuuna dhismahaasi u xuub siibtay ‘xukuumad koonfureed’ oo xagjirnimo iyo go’doon ku sii fogaanaysa. Qoondihii siyaasadeed ee ku salaysnaa in laga dhursugo xasilinta gobalada koonfureed si ay laysu waafajiyo helitaanka midnimo iyo rabitaanka Somailland gabaabsi buu taaganyahay, wuxuuna u baahanyahay wax ka bedel.” Ayay ku yidhaahdeen baaqooda, waxaanay intaas raaciyeen, ” Sabahaas xaqiiqda ah awgood, waxaanu soo jeedinaynaa tallooyinkan soo socda:
1. In xukumadda midnimo qaran ee Djibouti lagu dhisay waaqica u soo daadegto oo ay isku hawliso wax ka qabashada gobalada dhexe iyo koonfureed ee wadanka gaar ahaan gobalka Banaadir, uguna baaqdo adduun weynaha in Somaliland si toos ah loola dhaqmo, loo tixgeliyo, taageero dhaqaale iyo dmid siyaasadeedna la siiyo.
2. In ay Somaliland aqoonsato waajibaadka ka saaran xal u helida raadinta dhibaatooyinka ka taagan badhtamaha iyo koonfurta Somaliya, oo ay aqoonsato danaha ma guuraanka ah ee Somalialnd ugu jira xal u raadintaas.
3. Inay Somaliland, Puntlandi yo galmudug iska kaashadaan hawl;aha ammaanka iyo isku xidhnaanta dib u dhiska, dhaqaale iyo siyaasadda.”